Go’aan cusub oo laga gaaray howlgalka QM ee Soomaaliya | Xaysimo
Home War Go’aan cusub oo laga gaaray howlgalka QM ee Soomaaliya
Go’aan cusub oo laga gaaray howlgalka QM ee Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo maanta kulan ka yeeshay dib u eegista howl-galka Qaramada ee taageerada Soomaaliya, ayaa go’aan ku gaaray in muddo kordhin loo sameeyo howl-galkaas.
Xubnaha golaha amaanka ayaa isku raacay in UNSOM loo kordhiyo muddo 9 bilood ah xili howleedkeeda oo ku eeka maanta oo ay taariikhdu tahay 31-ka August ee 2021-ka.
Qaraarkaan ayaa tirsigiisu ahaa 2592, wuxuuna dhaqan-gelkiisu ka dhigaya in howl-galka Qaramada Midoobay ee taageerada Soomaaliya uu markale soo idlaan doono 31-ka bisha May ee sanadka soo socda ee 2022-ka.
Sidoo kale waxaa qaraarkaan lagu xusay in howl-galka UNSOM uu sii wado xiriirinta dadaalada Qaramada Midoobay iyo inay Iskaashi buuxda la yeeshaan dowladda federalka iyo dowlad-gobaleedyada xubnaha ka ah.
Waxaa si gaar ah loogu sheegay qeyb kamid ah qaraarkaas in howl-galka QM ee Soomaaliya ay qeyb ka tahay dhamaystirka heshiiskii laga gaaray nidaamka doorashada ee Soomaaliya, oo gaabis badan ku yimid.